Manoritra sary ho an'ny ankizy - Iza eto?
Manorata sary - mampifandray ny fifandraisana
Ny fampisehoana ny fifandraisantsika amin'ny teboka misy tarehimarika dia mampiroborobo ny fianarana am-pahalalahana ny tarehimarika, ary koa ny fifantohana sy ny fandrindrana ny mason'ny ankizy. Amin'izany fomba izany, dia ampianarina ny ankizy ny hanangana ny sary azy ireo.
Ahoana no anaovany izany? Ny ankizy dia mampifandray ireo hevitra voatanisa miaraka amin'ny penina. Amin'ny farany, misy endrika na zavaboary fanta-daza no miseho. Azo sary hosodoko ho "valisoa" ihany koa ilay sary nalaina.
Tsidiho ny sombin-tsarimihetsika malalaka ho an'ny sary. Kitiho ny rohy mankany amin'ny pejy miaraka amin'ny modely mifanaraka aminy:
Sary mampihomehy sy teny mahatsikaiky | hatsikana
Sary hosodoko ho an'ny olon-dehibe - maninona no tsy hosoloina fotsiny ...